တရုတ်မဟာတံတိုင်း ပြတိုက်အား ကမ္ဘာ့အဆင့်မီအဆင့်မြှင့်တင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ - Xinhua News Agency
Aerial photo taken on March 19, 2022 shows the scenery of the Great Wall after snow in Beijing, capital of China. (Photo by Liu Yu/Xinhua) တရုတ်နိုင်ငံမြို့တော် ပေကျင်းတွင် ဆီးနှင်းများ ကျပြီးနောက် မဟာတံတိုင်း၏ ရှုခင်းများကိုဝေဟင်မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ် ၁၉ ရက်တွင် ရိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံအားတွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း၊ ဧပြီ ၁၉ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်မဟာတံတိုင်းပြတိုက်သည် လာမည့်သုံးလအတွင်း ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိ ဒီဇိုင်းအဖွဲ့အစည်းများမှ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းအစီအစဉ်များကို စတင်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပေကျင်းမြူနီစီပယ်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဗျူရိုက ပြောကြားခဲ့သည်။ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း စီမံကိန်းမြေဧရိယာ စတုရန်းမီတာ ၂၇,၀၀၀ ခန့်ရှိပြီး ဆောက်လုပ်ရေး ဧရိယာမှာ စတုရန်းမီတာ ၁၆,၀၀၀ ခန့် ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးနောက် ယင်းပြတိုက်တွင် ပြပွဲစင်တာ၊ ဧည့်ဂေဟာနှင့် နိုင်ငံတကာ သုတေသနနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေးစင်တာတို့ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ပစ္စည်း ၅၀၀၀ ကျော် အား ထုတ်ပိုးခြင်းများနှင့် နေရာပြန်လည်ချထားခြင်းများအားဆောင်ရွက်ရန် အတွက် ယူနက်စကို၏ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာဖြစ်သည့် Badaling Great Wall ၏ ရှုခင်းသာဧရိယာတွင် တည်ရှိသော ၎င်းပြတိုက်အား ဧပြီ ၆ ရက်မှစ၍ ပိတ်ထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
BEIJING, April 19 (Xinhua) — The China Great Wall Museum has begun accepting schemes for renovation and upgrading from domestic and overseas design institutes over the next three months, the Beijing Municipal Cultural Heritage Bureau has said.
The renovation and upgrading project coversaland area of about 27,000 square meters andaconstruction area of about 16,000 square meters.
The museum, located in the scenic area of the Badaling Great Wall,aUNESCO World Heritage Site, has been closed since April6for packaging and relocation of its over 5,000 cultural relics. Enditem